5 myths about I UD - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သားအိမျတှငျးထညျ့ သားဆကျခွားပစ်စညျးမြားနဲ့ပတျသကျသော အယူအဆမှား (5)ခု
သားအိမျတှငျးထညျ့ သားဆကျခွားပစ်စညျးတှဟော စနဈတကမြှနျမှနျကနျကနျသာ အသုံးပွုမယျဆိုရငျ…. သန်ဓတေားရာမှာ သောကျဆေးတှထေကျ 45 ဆ နဲ့ အမြိုးသားသုံး condom တှထေကျစာရငျ အဆ 90 တောငျမှ ပိုစိတျခရြတယျ… ပိုထိရောကျတယျ ဆိုပါတယျ….
နောကျပွီး သိပျကောငျးတဲ့ အခကျြက … ခှဲစိတျမှူလို ကွီးကွီးမားမားတှေ လုပျစရာမလိုဘဲ …သူက ငါးနှဈတောငျခံတယျဆိုတာပါပဲ
ဒါပမေယျ့ ဘယျအရာတှကေမြား အမြိုးသမီး တှေ IUD လို့ချေါတဲ့… သားအိမျတှငျးထညျ့ သားဆကျခွားပစ်စညျးတှကေို အသုံးပွုဖို့နှောငျ့နှေးစပေါသလဲ….
အောကျမှာ ပွောပွမှာတှကေတော့…. IUD တှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ ကောလဟာလ တှပေဲ ဖွဈပါတယျ
(1) ကလေးတဈယောကျမှ မယူရသေးခငျ IUD ထညျ့တာဟာ အန်တရာယျမြားတယျ
အမြိုးသမီးတခြို့လှဲမှားစှာ ယုံကွညျနကွေတဲ့ အခကျြသာဖွဈပွီး American သားဖှားမီးယပျဆိုငျရာ congress က… Dr. Bryant ကတော့…. “အပြိုဖျောဝငျပွီး ဘယျသူမဆို လိငျဆကျဆံမှူရှိနတေယျဆိုရငျ IUD ကို သားဆကျခွားနညျး အဖွဈ ကောငျးကောငျး သုံးနိုငျတာပဲ” လို့ ဆိုပါတယျ..
(2) IUD ထညျ့တာဟာ အရမျးနာတယျ
လူတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျဟာ နာကငျြမှူကို ခံနိုငျရညျစှမျး မတူပမေယျ့… IUD ထညျ့တာဟာ လူအမြားစုအတှကျတော့ ငါးမိနဈစာ မသကျမသာဖွဈရုံပါ… အဲဒီ ငါးမိနဈစာ အပွီးမှာတော့ ငါးနှဈစာ ကလေးမရဖို့ သငျစိတျအေးရမယျမလား
(3) IUD ကွီး ပွုတျကသြှားနိုငျတယျ
တကယျတော့ အဲလို IUD ပွုတျကနြိုငျတာဟာ လူတဈရာမှ သုံးယောကျလောကျပဲ ဖွဈနိုငျခရြှေိတာပါ…
သငျ့ကို IUD ထညျ့ပေးတဲ့ ဆရာဝနျကလညျး IUD ကွိုးစလေးစမျးနညျးကို တပါတညျး သငျပေးလိုကျဦးမှာပါ
(4) IUD တှကေ ပိုးဝငျတာနဲ့ မြိုးမအောငျတာကို ဖွဈစတေယျ
တကယျတော့ နှဈလေးဆယျသုသတေန ပွုထားတဲ့ ရလဒျတှအေရတော့ IUD တှကွေောငျ့ ပိုးဝငျတာမဖွဈစသေလို ကလေးလိုခငျြတဲ့အခြိနျမှာလညျး ဒီပစ်စညျးကို ထုတျလိုကျတာနဲ့ ကိုယျဝနျရနိုငျပါတယျ
(5) ဆရာဝနျတှကေ IUD ထညျ့တဲ့အခါ သားအိမျကြုံ့သှားအောငျ ဆေးတှေ သုံးတယျ
IUD ထညျ့တဲ့အခါ ဆရာဝနျက သငျ့ရဲ့သားအိမျခေါငျးအဝကို ဖွညျးဖွညျးလေး ဟပွီးရငျ သားအိမျရဲ့ အရှယျအစားကို မှနျးပါလိမျ့မယျ.. . ပွီးတာနဲ့ IUD ကို အန်တရာယျကငျးကငျး ထညျ့လို့ရပါပွီ…
သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်သော အယူအဆမှား (5)ခု
သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားပစ္စည်းတွေဟာ စနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်သာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်…. သန္ဓေတားရာမှာ သောက်ဆေးတွေထက် 45 ဆ နဲ့ အမျိုးသားသုံး condom တွေထက်စာရင် အဆ 90 တောင်မှ ပိုစိတ်ချရတယ်… ပိုထိရောက်တယ် ဆိုပါတယ်….
နောက်ပြီး သိပ်ကောင်းတဲ့ အချက်က … ခွဲစိတ်မှူလို ကြီးကြီးမားမားတွေ လုပ်စရာမလိုဘဲ …သူက ငါးနှစ်တောင်ခံတယ်ဆိုတာပါပဲ
ဒါပေမယ့် ဘယ်အရာတွေကများ အမျိုးသမီး တွေ IUD လို့ခေါ်တဲ့… သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုဖို့နှောင့်နှေးစေပါသလဲ….
အောက်မှာ ပြောပြမှာတွေကတော့…. IUD တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကောလဟာလ တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်
(1) ကလေးတစ်ယောက်မှ မယူရသေးခင် IUD ထည့်တာဟာ အန္တရာယ်များတယ်
အမျိုးသမီးတချို့လွဲမှားစွာ ယုံကြည်နေကြတဲ့ အချက်သာဖြစ်ပြီး American သားဖွားမီးယပ်ဆိုင်ရာ congress က… Dr. Bryant ကတော့…. “အပျိုဖော်ဝင်ပြီး ဘယ်သူမဆို လိင်ဆက်ဆံမှူရှိနေတယ်ဆိုရင် IUD ကို သားဆက်ခြားနည်း အဖြစ် ကောင်းကောင်း သုံးနိုင်တာပဲ” လို့ ဆိုပါတယ်..
(2) IUD ထည့်တာဟာ အရမ်းနာတယ်
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဟာ နာကျင်မှူကို ခံနိုင်ရည်စွမ်း မတူပေမယ့်… IUD ထည့်တာဟာ လူအများစုအတွက်တော့ ငါးမိနစ်စာ မသက်မသာဖြစ်ရုံပါ… အဲဒီ ငါးမိနစ်စာ အပြီးမှာတော့ ငါးနှစ်စာ ကလေးမရဖို့ သင်စိတ်အေးရမယ်မလား
(3) IUD ကြီး ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်
တကယ်တော့ အဲလို IUD ပြုတ်ကျနိုင်တာဟာ လူတစ်ရာမှ သုံးယောက်လောက်ပဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာပါ…
သင့်ကို IUD ထည့်ပေးတဲ့ ဆရာဝန်ကလည်း IUD ကြိုးစလေးစမ်းနည်းကို တပါတည်း သင်ပေးလိုက်ဦးမှာပါ
(4) IUD တွေက ပိုးဝင်တာနဲ့ မျိုးမအောင်တာကို ဖြစ်စေတယ်
တကယ်တော့ နှစ်လေးဆယ်သုသေတန ပြုထားတဲ့ ရလဒ်တွေအရတော့ IUD တွေကြောင့် ပိုးဝင်တာမဖြစ်စေသလို ကလေးလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလည်း ဒီပစ္စည်းကို ထုတ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်
(5) ဆရာဝန်တွေက IUD ထည့်တဲ့အခါ သားအိမ်ကျုံ့သွားအောင် ဆေးတွေ သုံးတယ်
IUD ထည့်တဲ့အခါ ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့သားအိမ်ခေါင်းအဝကို ဖြည်းဖြည်းလေး ဟပြီးရင် သားအိမ်ရဲ့ အရွယ်အစားကို မှန်းပါလိမ့်မယ်.. . ပြီးတာနဲ့ IUD ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း ထည့်လို့ရပါပြီ…